युगसम्बाद साप्ताहिक - सूर्य सुवेदीको ‘दिशाहीन यात्रा’
Saturday, 04.20.2019, 11:45am (GMT+5.5) Home Contact
Tuesday, 09.18.2012, 02:49pm (GMT+5.5)
काठमाडौं । साहित्यकार सूर्य सुवेदीको नयाँ औपन्यासिक कृति ‘दिशाहीन यात्रा’को गत भदौ २८ गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती, प्रसिद्ध समालोचक डा. तारानाथ शर्मा, चर्चित लेखक जगदीश घिमिरे र प्रा.डा. मोहनप्रसाद लोहनीले संयुक्त रूपमा लोकार्पण गर्नुभयो । २०४६ को जनआन्दोलन र २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलन बीचका घटना र सन्दर्भहरूलाई विषयवस्तु बनाएर लेखिएको यो उपन्यासले समकालिन राजनीतिको दिशाहीन यात्राको सजीव चित्रण गरेको छ ।
उपन्यासकारले केही सुपरिचित राजनीतिक पात्रहरू र केही काल्पनिक पात्रहरू खडा गरेर सो समयावधिभित्रका ऐेतिहासिक घटना र समयक्रममा विकसित भएका अनेकौं विकृतिहरूको सम्यक विवेचना गर्नु भएको छ । समसामयिक राजनीतिक घटनामा केन्द्रित रहेर लेखिएको यो उपन्यासले द्वन्द्व साहित्यलाई नयाँ आयाम दिएको छ । यस अघि “सूर्य सुवेदीका कथाहरू“ लिएर पाठकका बीच आउनुभएका साहित्यकार सुवेदीको लेखन शैली जति सरल छ त्यत्तिकै परिमार्जित पनि छ ।
साहित्यिक कृतिहरू सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि उहाँले समसामयिक विविध विषयमा लेखहरू लेख्दैआउनु भएको थियो । केही समय गाण्डिव साप्ताहिकको सम्पादक–प्रकाशक भएर पनि उहाँले पत्रकारिता गर्नुभएको थियो । त्यसको छाप उहाँको साहित्यिक लेखनमा प्रचूर रहेको यी दुबै कृतिले पुष्टि गरेका छन् । यो उपन्यासले चर्चित कालखण्डका विविध घटनाबाट नेपाली जनजीवनमा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक असर कुन रूपमा पर्यो भनी राम्रोसंग केलाएको छ । विषयवस्तु र लेखन शैली दुवैले पाठकहरूको ध्यान खिच्नसक्ने देखिन्छ ।
दिशाहीन यात्रा उपन्यासवारे डा.तारानाथ शर्माको सटिक टिप्पणी छ– साहित्यमा जनताको चित्रण हुनुपर्छ, यो कृतिमा जनताको चित्रण छ । अहिले हामी दिशाहीन छौं, देश दिशाहीन छ– देशै जाला जस्तो भएको छ । यो कृति दिशाहीनताप्रतिको विद्रोह हो ।
उपकुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतिको भनाइमा यो नवकृतिले दिशाहिन यात्रालाई गतिपूर्ण बनाउन र नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्न चाहनेलाई राम्रो सामग्री दिएको छ । श्रष्टा जगदीश घिमिरेको दृष्टिमा यो राम्रो कृति हो । प्रा.गोपिकृष्ण शर्माको कथन छ– यो कृतिमा युगचेतना छ र सूचना चेतना पनि छ । प्रा.डा. मोहन लोहनीको टिप्पणी छ– मनोद्वन्द्वले भरिएको यो कृति विचार प्रधान छ भने इतिहासको दस्तावेजका रूपमा पनि यसको विशेष महत्व छ । समालोचक डा.खगेन्द्रप्रसाद लुइटेलको मूल्याङकन छ– यो कृति यो दशककै उत्कृष्ट कृति हो । विचार प्रधान यो उपन्यासले तटस्थ दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ । द्वन्द्वका विषयमा तटस्थ भएर कलम चलाउनु लेखकको विशिष्ट क्षमता हो । उपन्यासमा युगिन यथार्थको चित्रण छ । उपन्यासमा धेरै पात्रहरू छन् तर ती बोल्दैनन्, जति बोल्छन् लेखक आफैं बोल्छन् । यो नौलो प्रयोग हो ।
उपन्यासकार सुवेदीको कथन छ– अहिले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान घायल छ । २०४६ देखि २०६३ बैशाखसम्ममा नेपालमा घटेका राजनीतिक घटनाहरूले आम नेपालीको जीवनमा धेरै उथलपुथल ल्याए, जनजीवनमा धेरै असर देखिए, राजनीतिक, आथिकक क्षेत्रमा मात्रै होइन मनोवैज्ञानिक समस्या पनि ग्रामीण क्षेत्रले भोग्नुपर्यो । २०४६–२०६३ बीचको कालखण्डमा नेपाली जनजीवन जति चलायमान भएको छ, यस अघि कहिल्यै भएको थिएन । यस उपन्यासका पात्रहरू समयको फाइदा उठाउने चलायमान प्रतिनिधि पात्रहरू हुन् । समाज, समय र घटनाहरूको सूक्ष्म र ऐतिहासिक अध्ययन नै “दिशाहीन यात्रा” उपन्यासको विषय हो ।